Love ugu weyn ee dhan — TRIP LEE - SITE RASMIGA AH
Qof waliba waxa uu la jecel yahay. Haddii aan qiran ama ma, oo dhan oo naga mid ah aad u jecel yihiin this dabiiciga ah si ay u dareemaan jeclaa iyo mahadnaqayo by dadka kale. Qaar badan oo naga mid ah ku qaataan nolosheena oo dhan raadinayay qof inuu nagu jecel, oo rajaynaya in qof- qof- dhergin doonaa xiisootay this gudaha.
Waa hagaag, haddii aad qorsheyneysa inay naftaada waayi in hindiga maanta iyo aad rajeynaya in aad ugu dambeyntii ka dhergin doonaa u doonaysa in, Waxaan rabnaa in aad ogaato in aad Ujeedada waa mid aad u hooseeya. Ma aad heli doontaa jacaylka weyn ee dhan at casho iftiin shumac caawa. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira ah oo dhan awood, oo dhan dheregto, jacaylka kaamilka aad heli karto. Waxaa jira Ilaah wuu idin jecel yahay in ka badan aad abid ka fekeri karaa. Jacaylkiisa ma aha yeelsiiyeen oo uma baahnid in aad aad isaga u soo jiito ama ka shaqeeyaan, waxaa ka.
Ma Ilaah Love Us?
Waan ogahay mararka qaar badan oo naga mid ah la yaabanahay in Ilaah run ahaantii noo jecel yahay. Waxa uu u muuqdaa si fog. Oo waxaa laga yaabaa in aan joojin lahaa shaki lahayn haddii isna wuxuu sameeyey wax si ay u cad noo. Runta waxa ay na, Waxa uu hore u leedahay. Kitaabku waxa uu leeyahay, "Ilaah jacaylkiisii ​​inoogu muujiyey waayo, in intii aannu weli dembilayaal, Masiixu waa inoo dhintay.”
Oo haddana wuxuu leeyahay, "Waayo, Ilaah dunida jacayl u qabay, ayuu siiyey Wiilkiisa keliya oo uu, in ku alla kii isaga rumaystaa uusan lumin laakiinse uu lahaado nolosha weligeed ah.”
Ilaah waa uu soo bandhigay jacaylkiisa inoo ah jid aan la rumaysan karin, by siinta Wiilkiisa noo. Ha diidi fal ugu weyn ee jacaylka ee taariikhda dunida. Ha diidi lover ah ee naftaada. Halkii heli jacaylka in ay isku halleeyaa Ciise.
Waayo, kuwa naga mid ah kuwa rumeeyey isaga on, waxba kuma jiraan dunida abid inaga sooci karin jacaylka Ilaah. Oo jacayl dadkiisa waa sidaas u weyn oo, in aan marnaba wax si ay u samayn karto isaga nagu jecel in ka badan uu horey u sameeya.
Sidaas Maalinta Jacaylka, qaadan TOD wadnaha. Ma aha in aad si ay u eegaan kasta oo dheeraad ah. Ilaah wuu idin jecel yahay si qoto dheer
Dj Mas ama Samson • August 19, 2013 at 8:37 waxaan ahay • Reply
Trip Thanks Lee aad tahay Eebehenno run ah in aan nolosha Ilaah ha idiin barakeeyo!!!
Violetchirwa • August 19, 2013 at 8:38 waxaan ahay • Reply
waxaan ahay si xuubdheecaanka
Carolyn • August 19, 2013 at 8:38 waxaan ahay • Reply
Tru in, walaalkay. Nice in la arko gen soo socda qaato sababta. Ilaah laga yaabaa in aad dhul iyo saamaynta isaga, waayo,.
Aynu ku tukado, waayo, mid kale sida aan doonayno inaan isaga addeeca.
Kathy Washington7 • August 19, 2013 at 8:38 waxaan ahay • Reply
Ku jeclahay, Triplee!!! Marka aad comin’ in dekedda?????
Kayla:) • August 19, 2013 at 8:38 waxaan ahay • Reply